Daawo Sawirada Feedhkii Qarniga ee habeen hore dhex maray Mayweather iyo McGregor – Xeernews24
Daawo Sawirada Feedhkii Qarniga ee habeen hore dhex maray Mayweather iyo McGregor
Tartan loogu magac daray feedhkii qarniga ayaa habeen hore waxa ay ka dhacday dalka Maraykanka iyadoo feedhkaana uu dhex maray Floyd Mayweather iyo Conor McGregor.
Floyd Mayweather oo isagu horey us oo guuleystay 49jeer isla markaana aan weligiis laga guuleysan hase yeeshee labo sano kahor ayuu ka fadhiistay ciyaaraha Feedhka balse waxa uu dib u soo noqday si uu u la ciyaaro Conor McGregor oo ah ciyaaryahan guulo kasoo gaadhay ciyaaraha MMA/UFC oo ku faanay inuu labo wareeg oo kaliya ay ku qaadan doonto inuu uga guuleysto Mr.Mayweather.
Mayweather oo 40 jir ah, ahna maalqabeen lagu sheegi jiray ciyaaryahanka caalamka ugu qaalisan, ayaa sheegay in ciyaartan uu hadiyad uga dhigi doono dhamaan Dadka Madowga ah ee caalamka ku nool, isla markaana sheegay inuu cashar u dhigi doono ciyaaryahanka cadaanka ah ee Conor McGregor oo kasoo jeeda dalka Ireland.
Markii labada nin ay xalay ku kulmeen xarunta ciyaarta ka dhaceysay ee T-Mobile Arena ee ku taal Las Vegas, ayaa waxaa muuqatay in shacabka in badan taageero u muujinayeen McGregor.
Wareegyadii hore ee ciyaarta ayaa waxaa ku gacan sareeyey McGregor balse wareegii 4aad wixii ka dambeyay waxaa ciyaarta la wareegay Mayweather oo markale muujiyey khibradiisa dheer ee dhanka Feedhka, wareegii 10aad ayuu garsooraha ciyaarta joojiyey si uu u-badbaadiyo McGregor oo aad looga gacan-sareeyey. Ciyaarta ayaa socotay 28 daqiiqo oo ah in ka badan wakhtigii la filayey inay ciyaartan socon doonto.
Wuxuuna Mayweather dhigay rikoor cusub oo ka dhigaysa inuu yahay feedhyahankii ugu horeeyey oo guuleysta 50jeer isagoo aan weligiis bar-bardhac gelin ama laga guuleysan. Wuxuuna sheegay inuusan markale dib u ciyaari doonin.
Mayweather oo ah maalqabeen ayaa markale waxa uu habeen hore xereystey lacag gaadheysa boqol malyan oo dollar oo uu ku helay guusha uu ka gaadhay tartankan.
Dadka u soo daawasho tegey feedhka qarniga oo tiradooda inta garoonka fadhiday lagu sheegay 20,000 oo ruux ayaa waxaa ka mid ahaa aktarada caanka ah ee Bruce Willis, Leonardo DiCaprio,Jennifer Lopez iyo weliba xiddigaha kale ee LeBron James, James Harden iyo Mike Tyson.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/feerka-qarniga-1.jpg 432 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-28 12:00:092017-08-28 12:00:09Daawo Sawirada Feedhkii Qarniga ee habeen hore dhex maray Mayweather iyo McGregor
Halkan Ka Akhriso Xogo Laga Helay Sababtii Uu Shalay Horjooge Cali Khaliif Galaydh... Daawo: Xujeydii Ka Duushay Muqdisho Iyo Hargeysa Oo Rafaad Ku Haysto Madiin...